Ụlọ ihe eji emepụta ihe |Ndị na-emepụta ihe, ndị na-ebubata ihe n'ụlọ China
Pig Night Light LED Lamp Sensory Night Light Maka ụmụaka
Ìhè abalị a nke silicone nke nwere ihu ezi mara mma, nke ejiri silicone BPA-Free dị nro, enweghị akụkụ dị nkọ, anaghị ekpo ọkụ ma nwee ike itinye ya n'ihe ndina, ọkụ na-enye obi ụtọ na-emepụta ahụmịhe ezumike ezumike nke nwere ike ichebe ụmụ gị pụọ n'ọchịchịrị na nyere ha aka hie ụra.
Igwe ọkụ Silicone Night Light Projector Starry Night Light maka ụmụaka
A na-eji ihe silicone dị elu mee ihe ngosi ọkụ abalị na-adọrọ adọrọ, na-enweghị mmerụ ahụ na ụmụ gị, nye ụmụaka gị aka dị nro.Silicone mara mma ọkụ abalị dabara adaba maka ụmụaka, nwa ọhụrụ, ebe a na-elekọta ụmụaka, ụmụaka na-eto eto, ụmụaka nwere ike dobe oriọna mara mma na-egbuke egbuke n'akụkụ akwa akwa ma ọ bụ akwa.
Aha ngwaahịa: ụcha silicone na-agbanwe ìhè abalị
Akụrụngwa: Silicone ọkwa nri
Ụdị: Ọtụtụ ụdị, nwere ike ịhazi ya
Ọrịre dị ọkụ nke kichin Silicone gburugburu ahịhịa maka iko efere
Anyị silicone sponge na-mere na elu àgwà ọkwa material.You nwere ike iji nke a silicone ahịhịa maka ịsacha efere efere, efere, ite, pan, mkpụrụ osisi, akwukwo nri, ma ọ bụ dị ọcha etemeete set.
mpịachi efere obere njem silicone cup nri ọkwa okpomọkụ na-eguzogide retractable n'èzí maa ụlọikwuu bento igbe set
MICROWAVE & FREZER & NSỌ NCHE: Ọ bụ igwe efere, friza na ngwa ndakwa nri.
Nkwenye ọnọdụ okpomọkụ nke akpa a hapụrụ bụ ihe dịka -4°F~428°F/-20°C~220°C.
NDỤMỌDỤ: Ọ ga-ebuli elu ikuku VENT valvụ na mkpuchi ma ọ bụ wepụ ihe nkwụnye ahụ tupu ikpo ọkụ!
Nri nri China N'ogbe ọnụ ọnụ ọnụ ala a na-emegharị silikone akpa nri Vacuum Reusable Silicone Akpa Nchekwa nri
Ihe eji eme enyi-enyi: Site na imewe ala kwụ ọtọ na nke kwụ ọtọ, akpa zipa nwere enyi nwere ike iguzo ọtọ kwụ ọtọ, nke karịrị echiche.Ihe dị n'ime okirikiri na nnukwu oghere oghere dị n'elu na-eme ka ọ dị mfe ihicha, jupụta, ma nyere ya aka nkụ na ikuku.Ngwongwo na-ekpuchi anya na-enye gị ohere ileba anya ngwa ngwa na nri dị n'ime ma jikọta ọtụtụ ihe n'otu oge.
Nchekwa friza& Ihe Ọkwa nri: Akpa nchekwa ndị a enwere ike iji ya eme ihe nwere nchekwa friza.Anyị na-akwado ịsacha aka, n'ihi na igwe efere na oven Microwave ga-emebi mmechi okpukpu abụọ nke akpa nchekwa nri.Ọ dị mfe iji ahịhịa karama hichaa ma tinye akpa ndị ahụ n'elu iko ma ọ bụ iko ka ikuku kpọọ nkụ.